Sei Jailbreak iOS 8.3 | IPhone nhau
Jailbreak chishandiso cheIOS 8.3 chauya kubva kuchikwata cheTaiG, asi parizvino chishandiso ichi chinongowanikwa mune yayo vhezheni yeMicrosoft operating system, zvisinei, Kubva iPad Nhau tinoda kukupa iwe nhanho-nhanho dzidziso, kuti ugone Jailbreak yako iPad. Rangarira kuti chishandiso chakaburitswa makore mashoma apfuura, saka, yeuka kuti Jailbreak inogona kunge isina kugadzikana uye haugone kunakidzwa neako aunofarira matweaks kusvikira iwo akakodzera midhiya asvika.
1 Kufunga kwekutanga
2 Iyo Jailbreak nhanho nhanho
Rangarira kuti Jailbreak ichangoburitswa, saka Pachine zviro zvinoverengeka zvaunofanirwa kujekeserwa nazvo usati wapwanya chishandiso. Kutanga nekuenderana, kudzamara Cydia Substrate yagadziridzwa kune iyo nyowani vhezheni yeJailbreak pachave nekusaverengeka tweak isingazoshande kudzamara zvigadziriso zvasvika.
Rangarira, dzima Touch ID uye Tsvaga yangu iPhone usati waenderera, hongu usakanganwa kugadzira kopi yekushandisa yako usati watanga maitiroKana paine chero kukanganisa kunokwanisika, iwe unozogona kudzoreredza yako yese yakarasika ruzivo, uyezve, kana Jailbreak yeiyi vhezheni isingakugutsi, iwe unozongofanirwa kudzoreredza chishandiso uye kudzoreredza backup yako. Icho chishandiso chiri kupa zvikanganiso kumidziyo kana Jailbreak ichiitwa neiyo WiFi yakamisikidzwa, kana ikakupa kukanganisa, dzima iyo WiFi uye tangazve maitiro.
Iyo Jailbreak nhanho nhanho
Tichatanga kurodha pasi Jailbreak chishandiso kubva paiyo TaiG webhusaiti webhusaiti (HERE), usakanganwa kuti chishandiso ichi chinoshanda chete paMicrosoft's Windows operating system.
Isu tinotanga chishandiso, uye tinobatanidza yedu iPad kune PC kuburikidza ne USB. Tichaona kuti inochiziva uye tinogona kuenderera mberi Izvo zvakakosha kuti tisamise chechipiri bhokisi kutangira kumusoro, nekuti iro bhokisi zvese zvazvinoita kuisa 25PP application chitoro pane yedu kifaa, uyezve isu hatifarire. Uye ikozvino tinogona kudzvanya bhatani girini.
Iye zvino isu tinongomirira yekufambira mberi kubhawa kuti ipedze kuzadza, uye kana yapedza tinobvisa mudziyo wedu. Iva nemoyo murefu, zvinonyanya kuitika kuti iyo iPad inotangazve kakawanda panguva yekuita.
Kana tangopedza, isu tinowana mufananidzo unoratidzwa pazasi pemitsara iyi, uye tinogona kusimbisa kuti Jailbreak yakaitwa zvinobudirira.
Kana nhanho dzese dzaitwa nenzira kwayo, tichava neJailbreak inoitwa pane yedu kifaa. Sezvatakambotaura, Jailbreak haisati yanyatsoenderana uye yatora kunyange vashanduri nekushamisika, saka kana iwe wafunga kuzviita zvakadaro, tinokurudzira moyo murefu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » [Tutorial] Maitiro ekuJailbreak iOS 8.3
Ricardo gonzalez akadaro
Mangwanani akanaka pamusoro pezvakanakira ini ndine mubvunzo zvinoita here kuzviita pane iPad 1 ios 5.1.2
Pindura Ricardo gonzalez
Nenzira iyi kwete. Iyi nzira inoshanda kubva kuIOS 7 kuenda kuIOS 8.3
Mhoroi, ndine iphone 6 kuwedzera 8.3 uye handisi kuwana mudziyo?
iTunes yakaiswa uye kana ndikaiziva?
Angelo, Taig akagadzirisa yake JB chishandiso, kugadzirisa vhezheni 2.0 bugs